Ha Guursan Haweenka Noocan ah
In aad ku guuleysatid xaas wanaagsan hawl fudud ma ahan, rag badan waxay doon-doonayaan haweeney wanaagsan si buuxdana u buuxinayso waxa ay ku taamayaan. ragga way ku kala aragti duwanyihiin sida ay u dooranayaan midda nolosha la wadaagi laheyd, balse inta aad ku guda jirtid raadinta haweeneyda nolosha kula wadaageyso waxaad la kulmaysaa noocyo haweenka ka mid ah waxaana lagaa doonayaa in aad ka fogaatid kuwaa ayaga ah
1-Haweeney sii qorsheysay nolosheeda si faahfaahsan, sida dharka aad u iibin doontid, caruurta mustaqbalka aad yeelan doontaan magaca loo bixinayo, guriga ay degeyso, meesha ay ku noolaan doonto, sida ay noolaan doonto iyo wixii la mid ah. Haddii aad dooneysid guur caafimaad qaba, haddaba gabadha kugu furayso arrimaha guurka iyo qoys samaynta ka hor inta aadan baranin waxaa iska cad in aysan ahayn tii kugu haboonayd, sababtoo ah ma danaynayso adiga shaksiyadaad nooca aad tahay, iyo waxyaabaha aad danaynaysid, kaliya waxay danaynaysaa in aad ku guursatid sida ugu dhaqsiyaha badan, wuxuuna ku dhammaan doonaa midaan guulaysan.
2- Gabdhaha jecel in aadan ka maqnaan: qofka ragga ah wuxuu u baahan yahay in uu helo waqti uu kaligiis noolaado ama uu nasto, waxaa laga yaabaa inaad xidhiidh la yeelatid gabadh aan kuu ogolayn in ay ku siiso fursad aad ku keliyowdo, gaar ahaan maalmaha hore ee isbarashada, waxayna kallifaysaa inaad dareento cidhiidhi, waxay samaynaysaa wicitaano fara badan dhanka telephone-ka ah iyadoo aysan jirin sabab la taaban karo, waxaa haboon in aadan wax xidhiidh ah la yeelanin gabadha noocaan ah.
3- Gabadh Khiyaano badan: haddii aad xidhiidh la samaysid gabadh qof kale xidhiidh la leh (shukaansato), xusuuso in adigana ay kuu khiyaami karto sida ay u khiyaamayso qofka kale, sidaa daraadeed waa in aad u diyaar garowdaa in aad la kulmi doontid dhaawac dhanka damiirka ah.
4- Gabadh lacag jecel: waxaa laga yaabaa in aad aragtid gabadh yar oo uu qabo ama shukaansanayso nin da` ah, balse hantiile ah, waxaa hubaal ah in gabadhaas aysan ninka danaynaynin balse ay danaynayso hantidiisa, haddaba haddii ay kaaga muuqato in ay si wayn u danaynayso shaqada aad qabatid, iyo dhaqaalaha kaa soo galo, mararka qaarna ay ku weydiisanayso haddiyado qaali ah, waa in aad ka carartaa, tani kuma danaynayso adiga ee waxay danaynaysaa hantidaada.
5- Gabadh war badan: ragga waxay jecelyihiin in ay haasaawe la yeeshaan gabadh bulsho ah, awoodna u leh in ay kaftanto isla markaana la furi karto sheeko caadi ah, balse qofna ma jeclo in uu ag joogo gabadh war badan oo aan xaddidnayn, waxaa laga yaabaa in xidhiidhka uu wanaagsanaado maalmo balse waqti ka dib wuu xumaanayaa, maadaama ay ka sheekeyneyso wax kasta , laga soo bilaabo waxa ay ku soo quraacatay ilaa waxyaabaha suuqa looga sheekaysto, waxay marka dambe ku gaarsiinaysaa in aad jecleysato inaad dhegaha ka fureysato ayadoo kuu sheekeynayso. Haddaba ragga guurdoonka ah waxaa lagula dardaarmayaa in ay ka fogaadaan inta karaankooda ah gabdhaha noocaan ah si ay ugu guulaystaan samaynta xidhiidh loo aayo ama la mahdiyo.
F.G: dabecadahaasi waa kuwa ay iska bin karaan dumarku, maaha wax dhallad ah.
1- Gabadh Qurux badan balse aan caqli badnayn: ragga waxay ku kadsoomaan waqtiyo badan oo noloshooda ka mid ah quruxda gabdhaha, balse gabadhu haddii aysan awood u lahayn in ay ka hadasho ama ay cabirto fikirkeeda waxay si tartiib tartiib ah u luminaysaa danayntaadii, waxay halis u tahay in hadalkaaga oo dhan ay u fasirato fahamkeeda gaarka ah, sidaa daraadeed waxaad u diyaar garowdaa waqtiyo culays badan noloshaada ka mid ah.
F.G: waa loo dul qaadan karaa tan. hadday dhaga nugushahay
W/Q: Mohamed Walaaleeye
Tix : RadioDamal